အကောင်းဆုံး BM303-S-3-8PII ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ။ | Gaoji
2. ထုတ်ယူခြင်းအထူ: 15mm Copper busbar;
3. အမြင့်ဆုံးထိုးကြိတ်: ∅32 (အထူ mm10mm), ∅25 (အထူ≤15mm);
4. အမြင့်ဆုံး output ကိုအင်အား: 350KN ။
BM303-S-3 စီးရီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့်ဘက်စုံသုံးဘတ်စ်ကားထုတ်လုပ်သည့်စက်များ (မူပိုင်ခွင့်နံပါတ် - CN200620086068.7) နှင့်ပထမဆုံးတရုတ်ဆုံလည်ထိုးဖောက်စက်ဖြစ်သည်။ ဤစက်ကိရိယာများသည်တစ်ချိန်တည်းလုံးထိုးခြင်း၊ ညှပ်ခြင်းနှင့်ကွေးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင့်လျော်သောအသေကောင်များဖြင့်ထိုးနှက်ခြင်းယူနစ်သည်ပတ် ၀ န်းကျင်၊ oblong နှင့်စတုရန်းတွင်းပေါက်များကို ၆၀ * ၁၂၀ မီလီမီတာareaရိယာကို busbar တွင်ဖောင်းကြွနိုင်သည်။
ဤယူနစ်တွင်ဆုံလည်ပုံစံသေတ္တာအစုံအလင်ပါရှိသည်၊ ရှစ်ခုကိုထိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖောင်းကြွသေခြင်းတို့ကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ အော်ပရေတာသည် ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းထိုးကြိတ်သေတ္တာတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ် ၃ မိနစ်အတွင်းလုံးထိုးနှက်သောသေတ္တာများကိုလုံးဝအစားထိုးနိုင်သည်။
အလွှာငါ: 1500 * 1200အလွှာ II ကို: 840 * 370 1460 ၁၁.၃၇ 3803* 31.5 PLC + CNCကောင်းကင်တမန်ကွေး
လာကြတယ်ယူနစ် ကြေးနီ / လူမီနီယမ် ∅32 (အထူ ၁၀) ၂၅ (အထူ ၁၅) 350